Sokajy: Faculty & Staff
Zamniak antsoina hoe Liaison Development Development
Miarahaba anao amin'ny toerana vaovao, Michelle! I Michelle Zamniak dia notondroina ho mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ho an'ny fiaraha-miasa ao amin'ny Oniversiten'i Hodges Ao amin'ny toerana fampandrosoana ny fiaraha-miombon'antoka, i Michelle Zamniak dia tompon'andraikitra amin'ny fampivoarana ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny fiarahamonina ary ny fampandrosoana ireo vaovao ho an'ny oniversite. Izy dia miara-miasa amin'ireo fikambanana maro any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Florida, ao anatin'izany ny lisea any amin'ny faritra, ny orinasa, ny governemanta [...]	Hamaky bebe kokoa
Lujic dia miditra amin'ny oniversite Hodges ho AVP momba ny fitantanana fisoratana anarana
Tongasoa eto Hodges U, Branislav! Branislav Lujic Nomena anarana ho filoha lefitra mpanampy amin'ny fitantanana fisoratana anarana Amin'ity toerana ity, i Branislav Lujic dia manara-maso ny fidirana, ny fahatsapana voalohany ary ny ekipa misy ny mpianatra. Hanohy hampivelatra ny fananganana mpianatra sy ny torolàlana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena koa izy. Nahazo fahaizana 10 taona mahery tamin'ny fandraisana mpiasa sy fidirana mpianatra izy. Alohan'ny [...]	Hamaky bebe kokoa
Tongasoa, Chris MacNeil
Tongasoa eto amin'ny Hodges University, Chris MacNeil! Chris MacNeil dia niditra ho mpikambana tao amin'ny University of Hodges ho talen'ny fidirana ho ao amin'ny campus Fort Myers. Amin'ity toerana ity dia hanara-maso ny ekipan'ny fidirana miorina amin'ny oniversite Fort Myers campus izy. Hanatsara sy hampiofana hatrany ireo solontenan'ny fidirana i Chris, ankoatry ny fametrahana tanjona kendrena amin'ny fisoratana anarana. Chris [...]	Hamaky bebe kokoa
Manatevin-daharana ny Oniversiten'i Hodges i Arenas amin'ny maha-mpamorona famoronana zokiny azy
Tongasoa eto amin'ny Hodges University, Santiago Arenas! 12 martsa 2019 –NAPLES / FORT MYERS, FLA - Nanatevin-daharana ny Anjerimanontolon'i Hodges i Santiago Arenas ho mpamorona endrika vontoatin'ny marketing. Amin'ity toerana ity dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana marika sy famolavolana oniversite rehetra i Santiago ary hanara-maso ny famolavolana sy ny famokarana fitaovam-pivarotana eny amin'ny oniversite. Hanampy [...] koa i Arenas	Hamaky bebe kokoa
Fivarotana varotra - #MyHodgesStory Ahoana ny fomba nandehanan'ny profesora iray tamin'ny fampiasam-bola tamin'ny Wall Street ka hatramin'ny fampiasam-bola tao amin'ny efitrano fianarana Arnold Miyamoto dia niaina ny fiainana tamin'ny faran'ny lafiny hafa. Niorina tao amin'ny fitantanam-bolan'ny Wall Street nandritra ny 30 taona teo ho eo izy, nitantana olona 450+ isaky ny fotoana nanerana an'izao tontolo izao, niasa ho an'ny sandan'ny banky fampiasam-bola ao amin'ny Bank [...]	Hamaky bebe kokoa
Fandraisana an-tsitrapo aorian'ny taona maro lasa
Mamihina fatratra aorian'ny taona maro - Mampahafantatra an'i Dr. Dolores "Dee" Batiato Dr. Dolores "Dee" Batiato dia tia ny efitrano fianarana, ary ny fitiavany dia ny mampianatra, mampiditra ary mamporisika ny mpianany. Amin'ny maha profesora azy sy filohan'ny fitantanana fandaharana ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, dia azony ny zavatra takiana mba hanovana ny mpianatra ho lasa matihanina amin'ny fitantanana ary miteny amin'izy ireo hoe: “[...]	Hamaky bebe kokoa